မာရီယာ vazquez | 11/10/2021 20:00 | အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ
မင်းပီယာနိုတီးတတ်လား။ အိမ်မှာဒီတူရိယာကိုတီးဖို့သင်ယူနေတဲ့သူရှိလား။ ဒါဆိုရင်မင်းမှာတစ်ခုရှိသည် wall piano အိမ်မှာပါ။ ၎င်းတို့သည်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသောအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်နေရာပိုနည်းပြီးခမ်းနားသောစန္ဒယားထက်စျေးသက်သာသည်။
Grand pianos များသည်အလွန်ကြော့ရှင်းသည် ဒါပေမယ့်သူတို့အိမ်မှာနေဖို့အရေးကြီးတဲ့နေရာရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ မင်းအတွက်ပြဿနာမဟုတ်ရင်ဒီနေ့ငါတို့မင်းရဲ့အိမ်ကိုခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့စန္ဒရားနဲ့အလှဆင်ပြီးအဲဒါကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အလှဆင်ဖို့စိတ်ကူးတစ်ချို့ကိုမင်းကိုပေးခဲ့တယ်။
အနက်ရောင်ပီယာနိုများ သူတို့ကလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပုံမှန်အားဖြင့်အိမ်များနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်သီဆိုဖျော်ဖြေမှုများတွင်တူရိယာအဖြစ်သုံးသောအရာများဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အလွန်ကြော့ရှင်းသည်၊ ၎င်းသည်မငြင်းနိုင်ပါ။ သို့သော်၎င်းတို့သည်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ။ မင်းရဲ့အိမ်ကိုအလှဆင်ဖို့အညိုရောင်နဲ့အဖြူရောင်ပီယာနိုတွေကိုမင်းလောင်းနိုင်တယ်။
အရောင်အကြောင်းပြောတဲ့အခါအမြဲလိုလိုဧည့်ခန်းထဲမှာသီးခြားစတိုင်လ်တစ်ခုရလာတဲ့အခါလက်ျာဘက်ရွေးချယ်တာကငါတို့အတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်။ အနက်ရောင်ခမ်းနားသောပီယာနိုများသည်မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မဆိုလိုက်ဖက်သည်၊ သင်အခန်းကိုခေတ်ပြိုင်ဖြစ်သော်လည်းစိတ်အေးလက်အေးနှင့်သဘာဝပုံစံအတိုင်းဖြစ်စေလိုလျှင်၊ အညိုရောင်စန္ဒရား ဒါဟာမင်းရဲ့အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ အဖြူရောင်လား? အဖြူရောင်သည်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ပြည့်စုံပြီးအလွန်ခေတ်မီပြီးအနုပညာ ၀ န်းကျင်နှင့်လုံးဝလိုက်ဖက်သည်။
ဧည့်ခန်း ၎င်းသည်အိမ်တွင်အကြီးဆုံးအခန်းဖြစ်သောကြောင့်ခမ်းနားသောစန္ဒရားကိုနေရာချလေ့ရှိသည်။ ခမ်းနားကြီးကျယ်သောစန္ဒရားဖြင့်အိမ်အလှဆင်ရန်အသုံးအများဆုံးအဆင်မပြေမှုများတစ်ခုမှာများသောအားဖြင့်နေရာအတိအကျမရှိခြင်းကြောင့်ဧည့်ခန်း၌နေရာမရှာလျှင်အခြားအခန်းတစ်ခုတွင်ပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကတစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာလား။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ။
မင်းရဲ့စိတ်ကူးကခမ်းနားတဲ့စန္ဒရားကိုဧည့်ခန်းမှာထားဖို့ဆိုရင်အဲဒါအတွက်နေရာရှာပါ ပြတင်းပေါက်တစ်ခုအနီးမရ။ ထို့ကြောင့်သင်စန္ဒရားတီးချင်သည့်အခါသဘာဝအလင်းရောင်ကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်။ နွေးထွေးသောကော်ဇောတစ်ခု၊ ၎င်းအပေါ်မှခေတ်မီမီးခွက်တစ်ခုနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအနုပညာလက်ရာတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်နံရံပေါ်ရှိအချို့ပုံများ။
မင်းလည်းလိုအပ်လိမ့်မယ် ပီယာနိုကစားရန်မစင် တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်ကိုထိုင်ပြီးနားထောင်စေလိုလျှင်သက်တောင့်သက်သာထိုင်ခုံသို့မဟုတ်အိတ် ဒီနေရာဒါမှမဟုတ်ဒီနားမှာမင်းမှာအလုပ်စင်တစ်ခုထည့်ဖို့အခွင့်အရေးရှိရင်မင်းရဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ရမှတ်အားလုံးကိုအဲဒါကိုနေရာချနိုင်တယ်။
အိမ်ကြီးများနှင့်အတူ အလယ်လှေကား နှင့်ဤပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကြီးမားသောနေရာ၊ သင်ဤစန္ဒရားကိုနေရာချရန်ဤအားသာချက်ကိုယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ခန်းမသို့မဟုတ်ဧည့်ခန်းပိုင်အာကာသတစ်ခုကိုဖြည့်ရန်အလှဆင်ရန်လွယ်ကူသောနေရာမဟုတ်။
ကောင်းမွန်သောလှေကားများနှင့်သန့်ရှင်းသောနံရံများသည်သင်၏ grand piano ကိုကြည့်ကောင်းစေရန်သင်လိုအပ်သမျှဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏အိမ်ကိုခမ်းနားကြီးကျယ်သောစန္ဒရားဖြင့်အလှဆင်ရန်စိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခေတ်မီပြီးသီးသန့်၊ ဟုတ်ပါတယ်။ မင်းအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမင်းဧည့်သည်တွေပထမဆုံးမြင်တာကအဲဒါဘဲ။
မင်းမှာရှိလား ထပ်ခိုး (သို့) အခန်းလွတ် အိမ်မှာပါ? ဤသည်ခမ်းနားသောစန္ဒရားကိုတီးခတ်ရန်နှင့်အစမ်းလေ့ကျင့်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ အရမ်းကြီးကြီးနေဖို့မလိုပါဘူး။ သင်၏စာအုပ်များနှင့်တေးဂီတဖျော်ဖြေရန်စန္ဒယားအတွက်နေရာ၊ ထိုင်ခုံနှစ်ခန်းနှင့်သိုလှောင်ခန်းသာလိုအပ်လိမ့်မည်။
သင့်တွင်နေရာရှိလျှင်၎င်းကိုစန္ဒယားခန်းသို့ပြောင်းပါ စံပြအနေနှင့်၎င်းသည်အသံလုံစေရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်တခြားမိသားစုဝင်တွေကိုအနှောင့်အယှက်မပေးဘဲဒါမှမဟုတ်စိတ်အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲမင်းလေ့ကျင့်ချင်သလောက်လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။ သင်စန္ဒယားကိုအာရုံစိုက်နိုင်လိမ့်မည်။ အာရုံစူးစိုက်ရန်အသံလုံအသံအနည်းငယ်ထက်ပိုလိုပေမည်။ ၎င်းသည်အေး။ မနှစ်သက်စရာဖြစ်လျှင်အာကာသတစ်ခုပေါ်တွင်အာရုံစိုက်ရန်ခက်ခဲသည်။
ကော်ဇောကိုအာကာသထဲရှိကုလားထိုင်အချို့နေရာချပါ၊ အတွင်းရေးမှူးငယ်တစ် ဦး မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်တေးဂီတကိုရေးပြီးအထူးသဖြင့်မင်းကသဘာဝအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းမရရင်မင်းအလင်းရောင်ကိုဂရုစိုက်ပါ။ မတူညီသောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုသင်အောင်မြင်ရန်ခွင့်ပြုသောအခြားပိုမိုနီးစပ်သောအလင်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း » အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ » သင်၏အိမ်ကိုခမ်းနားကြီးကျယ်သောစန္ဒရားဖြင့်အလှဆင်ရန်စိတ်ကူးများ